Vaovao - Nahazo mari-pahaizana momba ny fanombanana mpamatsy volamena izahay
Mahazo mari-pahaizana momba ny fanombanana mpamatsy volamena Plus izahay
amin'ny 29 Oktobra, 2020
Tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, 2020, Hebei Lanwei Imp. & Exp.Co., Ltd dia nanatevin-daharana ilay mpamatsy voamarina natombok'i Alibaba
Gold plus Supplier dia mpamatsy kalitao avo lenta voamarin'ny herin'ny fahefana Alibaba Platform. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana an-tserasera sy ivelany, ny sehatra dia manamarina, manamarina ary mampita ny tanjaky ny mpivarotra, toy ny mari-pahaizana momba ny orinasa, ny mari-pahaizana momba ny entam-barotra ary ny fahaizan'ny orinasa. Ho fanampin'ny serivisy ataon'ireo mpikambana exitone, mpikambana ao amin'ny Jinping-Cheng Ny orinasa koa dia mankafy ny zon'ny marketing manokana, ny sehatra an-kalamanjana ary ny zon'ny fitaovana manankarena.
Nanomboka tamin'ny 1 Jolay 2018, Jinping-Cheng Enterprise dia nanjary mpanjifa kintana manokana, ary ireo mpamatsy sinoa manana isa kintana mpivarotra kintana 1 na mihoatra no afaka mividy. Ny mpanjifa ambaratonga mividy orinasa Jinping-Cheng dia hankafy ireto manaraka 8 ireto zo sy tombontsoa:
1. Ny tanjaky ny tanjaka: ny sisin'ny mpividy fampitana tanjaka feno, ny mombamomba ny mpanjifa kintana indray mipy maso
2. Fivarotana malaza manokan'i Jinpin-Cheng Enterprise: pejy fandraisana fivarotana malaza manana mari-pahaizana marobe, fitsapana maimaimpoana ny maodelim-pivarotana ofisialy malaza, fampisehoana fampahalalana marobe momba ny sokajy, fanatsarana ny traikefan'ny mpividy.
3. Fanaraha-maso ny ozinina feno: voamarin'ny orinasa manam-pahefana, fampisehoana seho tena izy, fisitrihana, fitokisana nampitomboina
4. Tombony amin'ny kaonty kely: havaozina ny fitantanana kaonty amin'ny sehatra, ary tombony fanampiny amin'ny kaonty 5 no homena
5. Lalao indostrialy: ny fepetra mitovy amin'izany dia aleony amin'ny toerana hanaovana hetsika
6. Tombontsoa amin'ny marketing: Zo manokana hividy vokatra dokam-barotra manokana ho an'ny fampirantiana diamondra
7. Andiam-pandraharahana amin'ny mpitantana angon-drakitra: namboarina, herin'ny fahitana angona, fantaro ny tenanao, fantaro ny indostria, fantaro ny mpifaninana aminao
8. Pass an'ny mpanjifa orinasa: fampidirana fampahalalana ho an'ny mpanjifa marobe, fitantanana mpanjifa salama, fanarahan-dia marina kokoa
Ankehitriny dia vanim-potoana angon-drakitra lehibe, indrindra ho an'ireo orinasa e-varotra, izay mila ny fanohanan'ny angon-drakitra lehibe, tsy misy afa-tsy izany ny e-varotra miampita sisintany. Manatsara sy manatsara hatrany izahay, hanompo ny mpanjifa manana haitao matihanina bebe kokoa.